Baroortu orgiga ka wayn! | WAJAALE NEWS
In la abuuro hay’ad si rasmiya u dabagala ururadaas iyo kooxahaas ayadoo laggu miisaamayo Shareecada iyo dhaqan keena suuban.
In la hirgaliyo Machad (institution) daraasaad, baadhitaan iyo xog ururin ku sameeya dhibaatooyinka iyo dagaalka ku wajahan diinta iyo dhaqanka talo bixinna siiya Dawladda iyo ururada bulshada.
Waa in la abuuraa ha’yad ka tirsan dawladda oo qaabilsan faaf reebka oo ilaalisa waxyaabaha khatarta ku ah dalka iyo dadkaba oo u kuur gasha waxyaalaha dalka dhexdiisa laggu faafinayo sida filmada.
ruwaayadaha,barnaamijyada ka baxaya TV iyo idaacadaha iyo dhamaan qalabka wax laysku gaadhsiiyo.
Waa in wada shaqayn dhaba loo sameeyo hay’adaha amniga iyo kuwa bulshada si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqyada dhaqan bi’iska ah ee socda.
Culimadu waa in ay door muhiima ka qaataan la dagaalanka kooxahaas iyo ururadaas wada shaqayn buuxdana la yeeshaan Dawladda iyo hay’adaha amnigga lana abuuro guddi wadajira oo heer qaran gaadh siisan oo qaabilsan Diinta iyo anshax.
Ilaahay diinta, dalka iyo dadkaba ha inoo xifdiyo
Ahmed Abdulkadir Ahmed